NITOYO waxay ahaan jirtay koox yar oo ka kooban 5 qof 2000, oo ku yaal Chengdu, Sichuan.Dadaalkeenii ka dib, waxa ay hadda u horumartay in ka badan 60 qofood oo noqday goob adeeg baabuur oo hal joogsi ah, iyada oo la kaashatay 180 waddan/gobollada waxaanay u adeegtay in ka badan 400 oo macaamiil ah.
Laga soo bilaabo 2000 ~
Sannadkii 2000, kooxdayada aasaaska ah waxay bilaabeen ganacsiga dhoofinta qaybaha baabuurta iyada oo la booqdo badan oo la gudbiyay iyo baaritaanka ku dhawaad ​​dhammaan warshadaha Shiinaha, waxayna heleen warshado ku habboon.
2000-2005 Balaadhinta Guud ahaan Suuqa Koonfurta Ameerika
Isku dayo iyo isbedelo badan ka dib waxaan ku guuleysanay inaan kasbano kalsoonida macaamiisha suuqa South America gaar ahaan Paraguay.
2000-2010 Dhalashada Calaamadahayada NITOYO&UBZ
Dadaal 10 sano ah ayaa naloo yaqaan NITOYO&UBZ adduunka oo dhan, macaamiil badan ayaa aaminsan tayada iyo adeegga NITOYO.Waxaa intaa dheer, sida calaamadayadu muujiso, waxaa naga go'an inaan bixinno alaabo aad u fiican si aan u ilaalino wadistaada.Iyadoo taas ku saleysan, waxaan hay'ado ku leenahay wadamo badan tusaale ahaan Paraguay, Madagascar.
2011 Horumarin Kala Duwan
Horumarinta internetka, waxaan bilaabeynaa inaan kordhino madal online ah oo ay ku jiraan dukaanka caalamiga ah ee Alibaba iyo website-kayaga rasmiga ah https://nitoyoauto.com/, facebook, link-in, youtube.
2012-2019 Kobaca Caalamiga ah
Sida aan horay u dhagax dhignay awgeed, waxaan si tartiib tartiib ah u ballaarineynaa suuqyo badan oo caan ka ah Afrika, Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe, iyo Koonfur-bari Aasiya Suuqa.
Sannadkii 2013-kii waxaanu si guul leh u aqbalnay suuqa Afrika waxaana aanu helnay dalabaadkii lagu qiimeeyay 1,000,000 USD.
2015 waxa aanu ku faraxsanahay in aanu noqono ka ay ku kalsoon yihiin saaxiibo badan oo Koonfur Bari Aasiya ah.
2017 waxa aanu ka qayb galnay bandhiga Latin iyo America Aapex intii u dhaxaysay Luulyo iyo Noofambar.Sannadkan waxaan ku helnay sumcaddayada labadan suuq sida dalabkayaga-1,500,000 USD la caddeeyey.
2018-2019 waxaan ka qayb galnay bandhigyo aad iyo aad u badan, oo loo dhoofiyay in ka badan 150 wadan.
2021 NITYO ayaa 21 jirsatay
Rajada korriinka ee kooxdu waa mid aad u wanaagsan.Laga soo bilaabo 2000, waxaanu ilaalinay ujeedkayagii asalka ahaa: si loo hubiyo in macaamiishu si kalsooni leh wax u iibsan karaan, macaamiishuna ay si kalsooni leh u isticmaali karaan!